Liverpool Oo Tixgalineysa Inay Dib U Soo Celiso Laacibka Reer Brazil Ee Philippe Coutinho
HomeWararka CiyaarahaLiverpool oo Tixgalineysa inay dib u soo celiso Laacibka reer Brazil ee Philippe Coutinho
October 14, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in ay dib u fureyso saxiixa Philippe Coutinho kaasi oo faloob ka noqday kooxda.
Kubadsameeyaha ayaa ku guuldarreystay inuu gaaro guulo muhiim ah tan iyo markii uu u dhaqaaqay Camp Nou bishii Janaayo 2017, xiddiga reer Brazil ayaa saftay 96 kulan tartammada oo dhan.
In kasta oo 29-sano jirkaan uu dhowaan ku soo laabtay ka dib dhaawac halis ah oo jilibka ah, Barcelona waxay ka walwalsan tahay dhibaatooyinka dhaawac ee soo gaaray ee xidigan.
Sida laga soo xigtay TV-ga El Chiringuito , Liverpool ayaa doonaysa inay ka faa’idaysato xaaladda iyada oo ka xaajoonaysa dib ugu laabashada Anfield ee kubad sameeyaha.
Warbixinta ayaa sidoo kale soo jeedineysa in 29 jirkaan uu u furan yahay inuu mar labaad ku ciyaaro Anfield, isagoo ka warqaba in kooxda Jurgen Klopp ay ka faa’iideysan karto khad dhexe hal abuur leh oo sidoo kale ka soo muuqan kara seddexda hore.
Coutinho waxaa uga harsan wax ka yar laba sano qandaraaskiisa Barcelona mana jirto fursad uu u heesto in heshiiska loo kordhiyo